Square na-achịkwa Tidal, ọrụ nkwanye egwu | Gam akporosis
Square azụtala Tidal, ọrụ ntanetị maka egwu egwu maka ọdịyo dị mma
Square enwetawo Tidal maka $ 297 nde nwere music gụgharia ọrụ bụ mgbe niile crazy banyere inye ndị kasị elu ga-ekwe omume ọdịyo àgwà ya ọrụ.
Square bụ ụlọ ọrụ nke etiti azụmahịa ya bụ obere "POS" ndị na-elekọta na anyị na-akwụ ụgwọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ azụmahịa na kaadị ma ọ bụ site na ụfọdụ usoro ịkwụ ụgwọ, dị ka Samsung Pay or Google Pay.
Ire ere ya emere site na ugwo nke nde dolla 297 ma na ahia ahia ma na ego di ocha. Dabere na ndị nta akụkọ pịa, Tidal ga-arụ ọrụ dị ka akụkụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ Square, n'agbanyeghị na akọwabeghị nkọwa niile nke otu ịzụta n'oge ahụ.
Ihe na-atọ ọchị banyere ire ere a bụ rapper Jay-Z, onye zụtara ụlọ ọrụ Tidal nke Aspiro, ga-abụ otu n’ime ndị isi nduzi. Osimiri ka dịgidere taa bụ ngwa nwere ndị ọrụ ya yana nke ahụ ka na-ebuso agha Google, Amazon na Apple.
Ugbu a olile anya site na nnweta site na Square na-enweta ụfọdụ ụdị mmetụta ya mere na n'ụzọ ụfọdụ dị ịrịba ama ọ nwere ike itolite ịghọ otu iji cheba echiche mgbe anyị kpebiri inweta ọrụ gụgharia egwu n'ịntanetị.
Achicha nke Spotify gara n’ihu na-achi na-efu ihe Apple Music, Amazon Music na Google ngwọta mee ha YouTube Music; obuna ugbu a agbakwunye Hi-Fi mma. Ọ ga-adị mkpa ịhụ maka ọnwa ndị na-abịanụ ma ọ bụrụ na ekwuputara ihe ọhụrụ nke nwere ike ịmetụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Square azụtala Tidal, ọrụ ntanetị maka egwu egwu maka ọdịyo dị mma
Etu ị ga-esi nweta foto gị site na iCloud ruo foto Google na jiffy